Chidzidzo chitsva chinotiratidza kuti iyo Apple Watch inobatsira sei kuona kurara kufema uye hypertension | IPhone nhau
Chaizvoizvo kubvira payakasvika pamusika makore maviri nehafu apfuura, iyo Apple Watch kwave kuchidzidzwa kutarisa zvese zvingaite mabasa ainogona kuve nezuva nezuva. Zviripachena Apple ndiyo yekutanga inofarira iyi mhando yekudzidza, sezvo iri imwezve chikonzero chekururamisa kutenga nemushandisi.
Chidzidzo chazvino chine chekuita neApple Wacth chakaitwa neUniversity yeSan Francisco muCalifornia mukubatana neCardiogram, kutanga kwakanangana nenyaya dzehutano. Ichi chidzidzo chinoratidza mashandisiro anoita Apple Watch inogona kutibatsira zuva nezuva-zuva kuona matambudziko ehutano.
Chidzidzo ichi chinotiratidza kuti Apple Watch ingatibatsira sei tsvaga matambudziko epnea panguva yekurara uye neBP. Zvinoenderana neongororo iyi, Apple Watch inokwanisa kuona mu90% yematambudziko, matambudziko ekufema kana munhu akarara, nepo aine chirwere cheBP, huwandu hwemhinduro dzakarurama hunokwira kusvika pa82%, manhamba anoshamisa.
Kuita chidzidzo ichi, iyo Cardiogram application yashandiswa muvatori vechikamu zviuru zvitanhatu kwenguva yakatarwa. Munguva iyoyo, iko kunyorera kwakaona matambudziko ekupererwa ekurara muvanegumi ne1.016, nepo vashandisi vane hosha yepamusoro vakakwira kusvika pa2.230.
Johnson Hsieh, mubatsiri pamwe neCardiogram, anotsanangura kuti chidzidzo ichi chinokwanisa kuratidza sei maApple Watch anoramba achititarisa sei, vachinyevera vashandisi pavanotanga, matambudziko e hypertension anoonekwa kuitira kuti vaende kuna chiremba nekukurumidza uye vadzivise zvakaipa zvakanyanya.
Pfungwa yechidzidzo ichi ndeyekuitisa ongororo inoenderera kuti uone vanhu vane hypertension vangangodaro vasingazive kuti vanayo. Kana dambudziko rikaonekwa, uye kuti riongororwe zvakanaka, mushandisi anofanira kuenda kuna chiremba kuti aongorore nemamita eropa reropa kuti zviyero zvipi uye zvozotevera kurapwa kwakakodzera.
Zvidzidzo zvakaita seCardiogram zvinotiratidza iyo Apple Watch inogona kubatsira sei kwete chete kune hutano hwevashandisi, asiwo zveindasitiri yehutano uye nekufamba kwenguva zvichave zvinonakidza kuona kuti kugona kwekupfeka kwaApple kunowedzerwa sei kufukidza mimwe misoro ine chekuita nezvehutano.
Apple ine zvirongwa zvehutano zvepamusoro zveApple Watch uye kutanga kwegore rino vakazivisa chidzidzo chitsva chinonzi Apple Inzwa Rate, chidzidzo chakaitwa pamwe nekubatana neStanford University. watchOS 4 inounza kwatiri kuwanda kwezvinhu zvitsva zvinoteedzera pamoyo sechikamu chekuedza kwaApple mune izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chidzidzo chitsva chinotiratidza mashandisiro anoita Apple Watch kuona kurara kwekufema uye neBP
Iyo inotevera HomePod inogona kuwedzera Chiso ID maererano nevanoongorora